The Ab Presents Nepal » अन्तत सकारले शाहस बटुलेर प्रचण्डका घरबेटीलाई कारवाही, ३ करोड जरिवाना !
अन्तत सकारले शाहस बटुलेर प्रचण्डका घरबेटीलाई कारवाही, ३ करोड जरिवाना !
काठमाडौं -: सरकारले सडक ठेक्का लिएर अपलत्र पारेको भन्दै शैलुङ कन्सट्रक्सन कम्पनीलाई कारवाही गर्ने भएको छ । नगरकोट जाने सडकको ठेक्का लिएर अलपत्र पार्ने ठेकेदार कम्पनी शैलुङ कन्सट्रक्सनलाई सडक विभाग अन्तरगतको सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयले कारवाही गर्न लागेको हो ‘।
नेकपा अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का घरबेटी समेत रहेका शैलुङ कन्सट्रक्सनका मालिक शारदा अधिकारीलाई निर्देशनालयले ३ करोड रुपैयाँ जरिवाना गर्न लागेको हो । उनको कम्पनीले कमलविनायकबाट भत्केकोपाटी हुँदै नगरकोट जाने सडक निर्माणको ठेक्का लिएको थियो’।
सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती र लापरवाही भएकाले शैलुङलाई ठेक्का रकमको १० प्रतिशत अर्थात झण्डै ३ करोड रुपैयाँ जरिवाना गर्न लागेको आयोजना प्रमुख जगत प्रजापतिले जानकारी दिए ।
२०७१ को जेठबाट निर्माण सुरु भएको १६ किलोमिटर सडकको काम सम्झौताअनुसार २०७३ को जेठसम्म सक्नुपर्ने थियो । तर अहिलेसम्म ५४ प्रतिशत मात्रै वित्तीय प्रगति भएपछि कारवाही गर्न लागिएको प्रजापतिले बताए’ ।
आयोजनाको हालसम्म ४ पटक म्याद थप भएको छ । शैलुङले आगामी जेठसम्ममा सडक निर्माणको लागि पछिल्लो पटक म्याद पाएको छ । कम्पनीले भने आगामी कार्तिकसम्म सबै काम सकेर सडकलाई हस्तानतरण गर्ने जनाएको छ । भारतीय एक्जिम बैंकको ३० करोड लगानी रहेको सडकको काम राम्रोसँग नभएपछि यसअघि ७ लाख हर्जना तिर्नुपरेको थियो ‘।
‘क’ वर्गको निर्माण कम्पनी भएपनि शैलुङले कम एमाउन्टमा आयोजना हात पार्ने र वर्षौसम्म अलपत्र पार्दै आएको थियो । उक्त कम्पनीको चर्को आलोचना भएपछि सरकारले गल्ती भेटिएमा कारवाही गरिने बताएको थियो । प्रचण्डका घरबेटी भएकाले उनीमाथि कारवाही हुनेमा शंका गरिएकै बेला निर्देशनालयले यस्तो कदम चालेको हो ‘।